Forum serasera malagasy 2000 taona lasa - Dinika forum.serasera.org
2000 taona lasa
Fitohizan'ny hafatra : 2000 taona lasa
rhaj0 - 16/09/2018 17:50
.. izao fampianarana ao anaty Baiboly ao izao, nefa dia mbola misy manaraka izany ara-baki-teny ihany.
ity izao no efa ela no malaza, fa mba tsy halazo dia aleo zaraina eto @ serasera eto
Santionany fotisny ireo fa dia ao @ bokin-dramatoa mitantara ny nanjo azy, dia ... giravy rey olona ny vokatr'ity "fampianara-mbaiboly" ity.
hery - 16/09/2018 19:50
Mariho tsara ihany aloha hoe fampianarana avy aiza?
Ny fampianarana avy ao amin'ny baiboly dia fampianarana an'Andriamanitra noho izany dia fampianarana ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavana tsy mikatsaka ho an'ny tena fa mitady izay mahasoa ny hafa. Tsy misy zavatra ratsy mety hivoaka amin'izany fitiavana izany. Koa tsy hitako ny olana amin'ilay fampianarana ao anaty baiboly.
Mazava ho azy, ny olona manao interpretation mety tsy mahita io fitiavana no mety mivaralila. Ary ny olombelona rehetra tsy voatery hahazo izany fampianarana izany. Fa tsy olan'ny baiboly izany fa olan'izay mandray sy izay tsy mizara araka ny tokony ho izy.
Miresaka mikasika ny hoe firaisana mialoha ny mariazy. Tsy izany ve no idealy? Ny aretina miparitaka, ny ankizy bevohoka maro... dia hoe fampianarana ratsy ve ny hoe aleo tsy manao firaisana mialoha ny mariazy? Ny mariazy no eritreretina hoe maha matotra ny fifandraisana fa misy koa aza anie mbola mandrava ny mariazy e! Raha ny tokony ho izy izany dia hoe tsy manao firaisana raha tsy tena hoe ho mpivady maharitra tanteraka... fa izao ara moa dia efa tsy zakan'ny olona.
Ny fampianaram-baiboly no hitako tsara indrindra amin'ny fampianarana rehetra. Ny vokany indray dia arakaraky ny fandraisanareo azy mazava ho azy.
rhaj0 - 18/09/2018 02:21
hery Mariho tsara ihany aloha hoe fampianarana avy aiza?
Avy ao @ Baiboly ilay Fampianarana io ry Hery aa... Mety TSY araka ny interprétation-nao, na koa hoe, interpréter-NAO ho diso/ratsy ilay ataon'nhy olona, fa dia avy ao @ Baiboly io ee.... (Fa tsy avy @ Siansa, na avy @ bokin'i bouddah)
hery Mazava ho azy, ny olona manao interpretation mety tsy mahita io fitiavana no mety mivaralila.
Eny ho'a ee.. rehefa TSY araka ny interprétation-nao dia mivaralila. Ny interprétation-dry Hery (irery) no TSY mivaralila fa ny hafa dia ireo mampalahelo manimba fi(s)ainan'olona io.
Fa ny kaonty farany dia io manimba fi(s)ainan'olona io ilay Baiboly ee...
(tsy ny bokin'i Bouddah no nanimba eo io fa ny Baiboly)
hery Ary ny olombelona rehetra tsy voatery hahazo izany fampianarana izany. Fa tsy olan'ny baiboly izany fa olan'izay mandray sy izay tsy mizara araka ny tokony ho izy.
TSy olana ho an'i Bouddah koa io fa olaNAREO samy Kristiana ao ee..
hery Ny fampianaram-baiboly no hitako tsara indrindra amin'ny fampianarana rehetra. Ny vokany indray dia arakaraky ny fandraisanareo azy mazava ho azy.
hi hi hi... mivoaha ho'a ao @ box-kely ao.
Ny aty provansin'i ONtario izao ohatra, dia misy ny sekoly katolika sady public, dia misy ny sekoly public (tsisy resa-pinoana).
Ao @ ilay sekoly katolika sady publika, dia misy lamesa, dia misy cours relizieux.
Ao @ ilay sekoly publika fa tsy katolika, dia mampianatra ny religion rehetra eran-tany, dia misy cours d'éthique
ka TSY hain-dry Hery ny "fampianarana ataon'ny hafa", fa ny azy (tanaty box) ihany no fantany, dia izay hono hozy ry Hery no "hitany tsara indrindra" ee...
rhaj0 - 22/09/2018 22:36
The message traumatized Klein and many of her peers, sparking fear, anxiety and, in the extreme case of one woman interviewed for the book, the symptoms of anaphylactic shock when she first had sex.
imazination-dry Hery Ny fampianarana avy ao amin'ny baiboly dia fampianarana an'Andriamanitra (...)
Miresaka mikasika ny hoe firaisana mialoha ny mariazy. Tsy izany ve no idealy?
Dia ilay ramatoa ve nama efa miteny hoe, noho io "Fampianara-mbaiboly" io, dia misy voan'ny anaphylactic shock mihsintsy , tsy lazaina intsony ny fear, anxiety.
Fa ny an-dry Hery dia vao mainka tampohiny, anaovany surcontré mihintsy eee... Angaha misy compassion mihintsy ry Hery rehefa milevona ao anaty fampianara-mbaiboliny ao. Nefa anie ilay ramatoa mbola nijanona ho Kristiana ihany ee...
Fa dia io efa vita cadre io ry Hery aa... Fransemà.. henatra ho anao.